Jizọs Hụrụ Obere Mkpụrụ Ego Nwaanyị Di Ya Nwụrụ Tụnyere (Mak 12) | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 23:25–24:2 MAK 12:41–13:2 LUK 21:1-6
JIZỌS AKATỌKWUO NDỊ NDÚ OKPUKPE
A GA-EBIBI ỤLỌ NSỌ AHỤ
NWAANYỊ DI YA NWỤRỤ NKE DARA OGBENYE ATỤNYE OBERE MKPỤRỤ EGO ABỤỌ
Na nke ikpeazụ Jizọs nọrọ n’ụlọ nsọ, ọ gara n’ihu ịgba ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii n’anwụ, na-akpọ ha ndị ihu abụọ n’ihu ọha. Ọ gwara ha, sị: “Unu na-eme ka azụ iko na efere dị ọcha, ma ime ha jupụtara n’ihe e bukọọrọ n’ike na imefe ihe ókè. Ndị Farisii kpuru ìsì, burunụ ụzọ mee ka ime iko na ime efere dị ọcha, ka azụ ya wee dị ọcha.” (Matiu 23:25, 26) Ọ bụ eziokwu na ndị Farisii na-asa anya na mmiri edebe Iwu ndị kwuru gbasara mmadụ ịdị ọcha iji fee ofufe na mmadụ ịdị ọcha n’elu ahụ́, ha na-eleghara ụdị mmadụ ha bụ anya. Ha achọghịkwa ime ka obi ha dị ọcha.
Ihe ọzọ gosiri na ha bụ ndị ihu abụọ bụ na ha na-ewu ili ndị amụma ma na-achọ ha mma. Ma Jizọs gwara ha na ha “bụ ụmụ nke ndị gburu ndị amụma.” (Matiu 23:31) Ihe gosiri na nke a bụ eziokwu bụ mbọ ndị ha gbara ka ha gbuo Jizọs.—Jọn 5:18; 7:1, 25.
Jizọs gwaziri ha ihe na-aga ime ha ma ọ bụrụ na ha echegharịghị. Ọ sịrị ha: “Agwọ, ụmụ ajụala, olee otú unu ga-esi gbanahụ ikpe Gehena?” (Matiu 23:33) Gehena pụtara Ndagwurugwu Hinọm. Ndagwurugwu a dị nso na Jeruselem. Ọ bụkwa ebe a na-akpọ ihe ndị e kpofuru ekpofu ọkụ. Ọ na-anọchi anya mbibi ebighị ebi a ga-ebibi ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii na-achọghị ichegharị.
Ndị na-eso ụzọ Jizọs ga-abụ “ndị amụma na ndị maara ihe na ndị na-ezi ihe n’ihu ọha.” Ha ga-esi otú a nọchite anya Jizọs. Olee otú ndị ndú okpukpe ga-esi kpasoo ha àgwà. Jizọs gwara ha, sị: “Ụfọdụ n’ime [ndị na-eso ụzọ m] ka unu ga-egbu, kpọgidekwa ha n’osisi, ụfọdụ n’ime ha ka unu ga-apịakwa ihe n’ụlọ nzukọ unu, kpagbuokwa ha site n’obodo ruo n’obodo; ka ọbara ezi omume dum a wụfuru n’ụwa wee dị n’isi unu, malite n’ọbara onye ezi omume bụ́ Ebel ruo n’ọbara Zekaraya . . . onye unu gburu.” Ọ gwakwara ha, sị: “N’ezie, ana m asị unu, ihe ndị a niile ga-abịakwasị ọgbọ a.” (Matiu 23:34-36) Ihe a Jizọs kwuru mechara mee n’afọ 70 mgbe ndị agha Rom bibiri Jeruselem ma gbuo ọtụtụ puku ndị Juu.
Obi adịghị Jizọs mma mgbe ọ na-eche banyere ihe ọjọọ a nke na-aga ime ndị Juu. N’ihi ya, o kwuru, sị: “Jeruselem, Jeruselem, nke na-egbu ndị amụma, nke na-atụkwa ndị e ziteere ya nkume,—lee ọtụtụ ugboro m chọrọ ịchịkọta ụmụ gị, dị ka nnekwu ọkụkọ si achịkọta ụmụ ya n’okpuru nku ya! Ma unu achọghị ya. Lee! A hapụworo unu ụlọ unu.” (Matiu 23:37, 38) Ndị nụrụ ihe a Jizọs kwuru ga na-eche “ụlọ” Jizọs na-ekwu okwu ya. Ọ̀ ga-abụ ụlọ nsọ ahụ mara mma dị na Jeruselem, nke ndị mmadụ nwere ike ịna-eche na Chineke na-echebe?
Jizọs kwuziri, sị: “Ana m asị unu, unu agaghị ahụ m ma ọlị malite ugbu a ruo mgbe unu ga-asị, ‘Onye a gọziri agọzi ka onye ahụ nke na-abịa n’aha Jehova bụ!’” (Matiu 23:39) Ihe a Jizọs kwuru si n’Abụ Ọma 118:26. Ebe ahụ, sịrị: “Ka Onye na-abịa n’aha Jehova bụrụ onye a gọziri agọzi; anyị esiwo n’ụlọ Jehova gọzie unu.” O doro anya na e bibihaala ụlọ nsọ ahụ, e nwekwaghị onye nwere ike ịbịa na ya n’aha Chineke.
Jizọs gaziri n’ebe e dowegasịrị igbe onyinye n’ụlọ nsọ ahụ. Ndị mmadụ na-esi n’obere oghere ndị dị n’elu igbe ndị ahụ atụnye ego. Jizọs hụrụ ndị Juu ka ha na-atụnye onyinye ha, hụkwa ndị bara ọgaranya ka ha “na-atụnye ọtụtụ mkpụrụ ego.” Jizọs hụziri ka otu nwaanyị di ya nwụrụ nke dara ogbenye tụnyere “obere mkpụrụ ego abụọ nke ga-azụtali ihe dị nnọọ nta.” (Mak 12:41, 42) Jizọs ma na onyinye nwaanyị a nyere mere ka obi tọọ Chineke ụtọ.
Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya sị ha: “N’ezie, ana m asị unu na nwaanyị a di ya nwụrụ, bụ́ onye dara ogbenye, tụnyere ihe karịa ihe ndị niile ahụ na-atụnye ego n’igbe ndị ahụ a na-atụnye ego tụnyere.” Olee otú o si tụnye ihe karịa ndị ahụ niile? Jizọs kwuru, sị: “Ha niile tụnyere ihe site n’ọtụtụ ihe ha nwere, ma nwaanyị a tụnyere ihe niile o nwere, ihe dum o ji biri, n’agbanyeghị na ọ nọ n’ụkọ.” (Mak 12:43, 44) Otú nwaanyị a si eche echiche na otú o si eme ihe dị nnọọ iche n’otú ndị ndú okpukpe ahụ si eche echiche na otú ha si eme ihe.
Ka abalị iri na otu n’ọnwa Naịsan ji nwayọọ nwayọọ na-agwụ, Jizọs si n’ụlọ nsọ ahụ pụọ. Ihe a bụ nke ikpeazụ ụkwụ ya kpara n’ụlọ nsọ ahụ. Ka ha na-apụ, otu n’ime ndị na-eso ụzọ ya gwara ya, sị: “Onye Ozizi, ị̀ hụkwara ụdị nkume ndị a na ụdị ụlọ ndị a?” (Mak 13:1) N’eziokwu, nkume ụfọdụ e ji rụọ ụlọ nsọ ahụ buru ezigbo ibu. O so n’ihe ndị mere ụlọ nsọ ahụ ji sie ezigbo ike ma yie ihe na-enweghị ike ịda ada. N’ihi ya, ọ ga-eju onye ahụ na-eso ụzọ Jizọs anya mgbe Jizọs gwara ya, sị: “Ị̀ hụrụ nnukwu ụlọ ndị a? A gaghị ahapụ otu nkume n’elu nkume ibe ya ma ọlị n’ebe a n’akwatughị ya.”—Mak 13:2.
Mgbe Jizọs kwuchara ihe a, ya na ndịozi ya gafere Ndagwurugwu Kidrọn ma rịgoro n’elu Ugwu Oliv. E nwere mgbe ya na mmadụ anọ n’ime ndịozi ya nọ. Aha ha bụ Pita, Andru, Jems, na Jọn. Ha nwere ike isi n’ebe ahụ ha nọ n’ugwu ahụ na-ekiri ọmarịcha ụlọ nsọ ahụ.
Olee ihe Jizọs mere n’ụbọchị ikpeazụ ọ nọrọ n’ụlọ nsọ ahụ?
Gịnị ka Jizọs kwuru ga-eme ụlọ nsọ ahụ?
Gịnị mere Jizọs ji kwuo na nwaanyị ahụ di ya nwụrụ tụnyere ihe karịa ndị bara ọgaranya?
mailto:?body=Ụbọchị Ikpeazụ Jizọs Nọrọ n’Ụlọ Nsọ%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102014710%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ụbọchị Ikpeazụ Jizọs Nọrọ n’Ụlọ Nsọ
Ị̀ Maara?—Jenụwarị 2014